Ihowuliseyili LED eziJiko-aluminium nomakhi ne Pricelist | Ristar
Aluminium 40w eziJiko Iimpawu: 1.Use aluminiyam phezulu-grade, conductivity thermal egqibeleleyo kunye radiation nobushushu. kwizinga 2.High ebudeni steel stainless, isiphumo elungileyo kulungisiwe. transmittance ukukhanya 3.High, ukufana ezilungileyo luminance. 4.Dustproof nokusebenza kakuhle anti-inkungu. 5.High kwizinga sokuthengisa LED iitshiphusi, phezulu ezikhanyayo. ufakelo 6.Simple, ezahlukeneyo ufakelo indlela: 1) Hanging ucingo ufakelo 2) Ufakelo ngokusebenzisa ebudeni yentsimbi 3) ​​ufakelo Group. Enye yi conne enye ...
Aluminium 40w eziJiko Iimpawu:
1.Use aluminiyam phezulu-grade, conductivity thermal egqibeleleyo kunye radiation nobushushu.
Kwizinga 2.High ebudeni steel stainless, isiphumo elungileyo kulungisiwe.
Transmittance ukukhanya 3.High, ukufana ezilungileyo luminance.
4.Dustproof nokusebenza kakuhle anti-inkungu.
5.High kwizinga sokuthengisa LED iitshiphusi, phezulu ezikhanyayo.
Ufakelo 6.Simple, ezahlukeneyo ufakelo indlela:
1) Hanging ucingo ufakelo
2) Ufakelo ngokusebenzisa ebudeni yentsimbi
3) ufakelo Group. Enye yi enye enxulumene ukuphumeza konke, nokuyila iipateni lomzobo.
Kusetyenziswa 8.Widely kuzo zonke iimeko endlwini.
Okulandelayo: LED eziJiko-Iron
Ezibengezelayo zokukhanyisa lwemidlalo
Kwabangela zokukhanyisa ezibengezelayo
Indlela ukugweba umgangatho LED ultra-thi ...
Ingcebiso engxamisekileyo: Zininzi izinto ezenziwa ziipaneli zephaneli ezicekeceke kwimarike. Sazi njani ukuba loluphi olukumgangatho ongcono? Ukukhanya kwepaneli ye-ultra-thin ukukhanya kunokuthiwa ngummeli obalaseleyo wokugcina amandla okuLa ...
Ziintoni iimpawu ezibonisa ...
Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zezibane, iimveliso zokukhanyisa ezorhwebo zineempawu ezahlukeneyo kwaye zahlukile. Izibane zorhwebo zisetyenziswa ikakhulu kwiindawo zentengiso. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zezibane, t ...
Kwimeko yokwakhiwa kwendawo, ubomi benkonzo yesibane se-LED kunye nefuthe lokusetyenziswa kwayo lihambelana ngokusasazeka kobushushu. Ukuba isiphumo sokusasaza ubushushu kwesibane se-LED asisihle, siya kuchaphazela ngokuthe ngqo ...
isilingi Led iPhaneli Light , LED Solar zitshajwe Light Flood, Philips 3030 Led Light Flood, Led Tri-Ubungqina Light mdlalo , Kwabangela Floodlight 30w, Ekhokelwa sasibhalwe Light Flood,